Warbixin : Xaalad adag Oo Ka Taagan Magaalada Xalab Ee Dalka Suuriya. – Bogga Calamada.com
Warbixin : Xaalad adag Oo Ka Taagan Magaalada Xalab Ee Dalka Suuriya.
Ciidamada Nidaamka Nuseyriga iyo Maleeshiyaadka Shiicada ah ee garabka siinaya ayaa toogtay 79 qofood oo rayid ah kadib markii ay la wareegeen Xaafadaha Al-firdows, Al-saalixiin iyo Bustaan Al-Qasar ee magaalada Xalab.
Ciidamada Bashaar Al-Asad ayaa hadda waxay maamulayaan ku dhawaad 95% masaaxada ay ku fadhiso magaalada Xalab, iyadoo dhowr xaafadood oo fara ku tiris ah ay weli ku harsan yihiin gacanta Kooxaha Mucaaradka.
Shabakadda lagu magacaabo Shaam Press ayaa sheegtay in Ciidamada Bashaar Al-Asad iyo Maleeshiyaadka Shiicada ee ay garabsanayaan in maalintii shalay ay la wareegeen Xaafadaha kala ah Sheekh Saciid, Baabul Maqaam, iyo Al-Kalaasah, waxay sidoo kale qabsadeen qeybo ka mid ah Xaafadaha Al-Ansaari, Al-Zabdiyah, Salaaxu Diin, Al-Caamiriyah iyo Seyfu-Dowlah.
Dad goob joogayaal ah ayaa waxay sheegeen in diyaaradaha Dagaalka ee Nidaamka Nuseyriga iyo kuwa Ruushka inay sii xoojiyeen duqeymaha dhanka cirka ee ay ka geysanayaan magaalada Xalab, iyadoona tobonaan qofood ay saacadihii lasoo dhaafay ku dhinteen duqeymahaasi.
Kooxaha difaaca Madaniga ayaa sheegaya in Meydad fara badan ay daadsan yihiin waddooyinka magaalada Xalab, waxaa sidoo kale jira Meydad ku hoos jira bur burka dhismayaasha dumay hoostood, iyadoo ay adkaatay in lasoo saaro duqeymaha dhanka cirka ee sii soconaya aawadood.
Dadka ku goâ€™doonsan magaalada ayaa dalbanaya in nolashooda la bad baadiyo, xilli dhinaca kale Ciidamada Nidaamku ay sii wadaan inay kusii siqaan Xaafado hor leh oo kuyaalla bariga magaaladaasi.
Goâ€™doonka saaran Xaafadaha kuyaalla bariga magaalada Xalab iyo duqeymaha aan kala joogsiga ah ee ku soconaya waxaa sii dheer iyadoo ay ay gebi ahaanba xirmeen Isbitaallada iyo goobihii kale ee Caafimaadka ee kuyaallay magaalada, iyadoo dadka ku dhaawaca duqeymaha ay waddooyinka dhiig bax ugu dhimanayaan sida ay ku warrrameen wariyeyaasha fara ku tiriska ah ee weli ku harsan magaaladaasi.
Dhinaca kalena 18 qofood ayaa dhintay, inkabadan Lixdan kalena way dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay duqeymo wuxuushnimo ah ka geysteen Suuq kuyaalla bartamaha magaalada Al-Raqaqah ee Waqooyiga dalka Suuriya.
Sidoo kale, waxaa sare u kacay tirada dadkii ku nafwaayay duqeyn loo adeegsaday Gaaska Sunta ah oo maalintii shalay ka dhacday degmada Cuqeyraat ee Gobolka Xamaah, iyadoo tirada dadka duqeyntaasi ku nafwaayay ay hadda mareyso ku dhawaad boqol ruux, iyadoona inkabadan 250 kale ay ku neef qabatimoobeen waxyeellada ka dhalatay Gaaska sunta ah ee loo adeegsaday duqeyntaasi.